आइफोन ११ को डिजाइन भयो लिक, यस्तो हुनेछ नयाँ आइफोन - VOICE OF NEPAL
२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार ११:५३
532 ??? ???????
आइफोन ११ (iPhone 11) को बारेमा समाचारहरु आउन सुरु गरेको छ । एप्पलले आगामी सेप्टेम्बरमा आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट आइफोन ११ (iPhone 11) सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले आएर हामीमाझ आइफोन ११ को डिजाइन मात्र लिक भएको छ, तर अन्य आधिकारिक जानकारी भने गराइएको छैन ।
आइफोन ११ को ब्याट्री पछिल्लो आइफोनको तुलनामा निकै फावरफुल हुनेछ । यसका साथै कम्पनीले आइडी र वायरलेस चार्जिङलाई पनि अपग्रेड गर्नसक्छ ।